မနက်တိုင်းအသုံးပြုနေတဲ့ သွားတိုက်ဆေးရဲ့ အစွမ်းများ...! - Thadin
HomeHEALTHYမနက်တိုင်းအသုံးပြုနေတဲ့ သွားတိုက်ဆေးရဲ့ အစွမ်းများ…!
မနက်တိုင်းအသုံးပြုနေတဲ့ သွားတိုက်ဆေးရဲ့ အစွမ်းများ…!
March 2, 2019 Kay Kay HEALTHY Comments Off on မနက်တိုင်းအသုံးပြုနေတဲ့ သွားတိုက်ဆေးရဲ့ အစွမ်းများ…!
(၂) ၀က်ခြံပြသာနာများ သွားတိုက်ဆေးကို နားကြပ်တံ သို့ ဂွမ်းတံလေးနဲ့ ယူပြီး ၀က်ခြံပေါက်နေသည့် နေရာများကို ပါးပါးလေးပွတ်လိမ်းပေးပါ။ နာရီအနည်းငယ် သို့ တစ်ညလုံးနီးပါးလိမ်းထားပြီး ရေနဲ့ဆေးချလိုက်မယ်ဆိုရင် ၀က်ခြံတွေ ချပ်သွားတာကို တွေ့နိုင်မှာပါ။
ဒီနည်းလမ်းဟာ လူတိုင်းနဲ့တော့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး၊ အသားအရေ sensitive ဖြစ်တဲ့ သူတွေဆိုရင်တော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။
(၇) လက်သည်း၊ ခြေသည်းများအား သန့်ရှင်းနိုင်ခြင်း လူတစ်ယောက်မှာ မျက်နှာပြီးရင် လက်သည်း၊ ခြေသည်းတွေဟာလည်း လှပနေဖို့ အရေးကြီးဆုံးထဲမှာ ပါပါတယ်။
သွားတိုက်ဆေးနဲ့ လက်သည်း၊ ခြေသည်းတို့ကို သွားပွတ်တံ (သို့) ဂွမ်းစလေးနဲ့ ၅ မိနစ်ခန့် ပွတ်တိုက်ပေးပြီး ရေဆေးချလိုက်မယ်ဆိုရင် ပိုမိုလှပတောက်ပြောင်တဲ့ လက်သည်း၊ ခြေသည်းလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။
(၉) နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေ နူးညံ့အောင်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းသွားတိုက်ဆေးကို နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေ နူးညံ့အိစက်နိုင်အောင်လည်း ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားတဲ့ နေရာမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သွားတိုက်ဆေးနဲ့ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနဲ့ရောပြီး နှုတ်ခမ်းသားကို သွားတိုက်တံ သို့မဟုတ် ဂွမ်းစလေးနဲ့ ညင်ညင်သာသာလေး ပွတ်တိုက်ပေးရမှာပါ။ သွားတိုက်ဆေးကို အများကြီးတော့ မသုံးရပါဘူး။ အဲလိုလေး ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် သင့်နှုတ်ခမ်းသားမှ ဆဲလ်သေတွေ ကင်းစင်ပြီး နူးညံ့တဲ့နှုတ်ခမ်းတစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာနော်…
(၂) ၀ကျခွံပွသာနာမြား သှားတိုကျဆေးကို နားကွပျတံ သို့ ဂှမျးတံလေးနဲ့ ယူပွီး ၀ကျခွံပေါကျနသေညျ့ နရောမြားကို ပါးပါးလေးပှတျလိမျးပေးပါ။ နာရီအနညျးငယျ သို့ တဈညလုံးနီးပါးလိမျးထားပွီး ရနေဲ့ဆေးခလြိုကျမယျဆိုရငျ ၀ကျခွံတှေ ခပျြသှားတာကို တှနေို့ငျမှာပါ။
ဒီနညျးလမျးဟာ လူတိုငျးနဲ့တော့အဆငျမပွနေိုငျပါဘူး၊ အသားအရေ sensitive ဖွဈတဲ့ သူတှဆေိုရငျတော့ မလုပျသငျ့ပါဘူး။
(၇) လကျသညျး၊ ခွသေညျးမြားအား သနျ့ရှငျးနိုငျခွငျး လူတဈယောကျမှာ မကျြနှာပွီးရငျ လကျသညျး၊ ခွသေညျးတှဟောလညျး လှပနဖေို့ အရေးကွီးဆုံးထဲမှာ ပါပါတယျ။
သှားတိုကျဆေးနဲ့ လကျသညျး၊ ခွသေညျးတို့ကို သှားပှတျတံ (သို့) ဂှမျးစလေးနဲ့ ၅ မိနဈခနျ့ ပှတျတိုကျပေးပွီး ရဆေေးခလျြိုကျမယျဆိုရငျ ပိုမိုလှပတောကျပွောငျတဲ့ လကျသညျး၊ ခွသေညျးလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျမှာပါ။
(၉) နှုတျခမျးသားလေးတှေ နူးညံ့အောငျပွုလုပျနိုငျခွငျးသှားတိုကျဆေးကို နှုတျခမျးသားလေးတှေ နူးညံ့အိစကျနိုငျအောငျလညျး ဆဲလျသတှေကေို ဖယျရှားတဲ့ နရောမှာလညျး အသုံးပွုနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
သှားတိုကျဆေးနဲ့ မုနျ့ဖုတျဆိုဒါနဲ့ရောပွီး နှုတျခမျးသားကို သှားတိုကျတံ သို့မဟုတျ ဂှမျးစလေးနဲ့ ညငျညငျသာသာလေး ပှတျတိုကျပေးရမှာပါ။ သှားတိုကျဆေးကို အမြားကွီးတော့ မသုံးရပါဘူး။
အဲလိုလေး ပွုလုပျပေးမယျဆိုရငျ သငျ့နှုတျခမျးသားမှ ဆဲလျသတှေေ ကငျးစငျပွီး နူးညံ့တဲ့နှုတျခမျးတဈစုံကို ပိုငျဆိုငျနိုငျမှာနျော…
ကျိုက်ထီးရိုးသို့ ရပ်ဝေးမှလာသော မိတ်ဆွေများအတွက် ၀မ်းသာစရာ သတင်းကောင်းပါ
This Year : 272681
Total Users : 631705
Total views : 2958300